Bayaan Ay ONLF kasoo Saartay Dilkii Taysiir Cumar Food | ogaden24
Bayaan Ay ONLF kasoo Saartay Dilkii Taysiir Cumar Food
Marjinta Taysiir Cumar Food waa Bilowga Dhamaadka Taliska TPLF ee Dhulka Soomaaliyeed.
Markii ay taariikhdu ahayd 10 May, 2018 ayaa maxaysata Liyuu-Police ka la yidhaahdo ee ay TPLF u xilsaartay gumaadka iyo xasuuqa shacabka Soomaalida Ogadenya ay afduubeen kadibna lagu marjiyay saldhiga booliska ee magaalada Qabridahare Allaha unaxariistee Marxuumad Taysiir Cumar Food.
Xadhigii Taysiir 30 daqiiqo kadib ayaa loo yeedhay xigtadii marxuumada si looga sixiixo in ay gabadhoodii la marjiyay ay iyadu gacanteeda isku daldashay ee aysan jirin cid kale oo marjisay Taysiir. Qoyskii marxuumaya ayaa durbadiiba sawiro kaqaaday maydkeeda oo ay ka muuqdaan xadhigii loo adeegsaday in lagu marjiyo iyo calaamado kale uu muujinaya jidh-dilkii loo gaystay. Qoyska ayaa diiday in ay warqadii been abuurka ahayd sixiixaan kadibna usoo cararay dhanka badhtamaha magaalada.
Kadib markii uu shacabku maqlay sida ay wax u dheceen ayaa waxaa bilowday banaanbax balaadhan oo ka dhan ah falkan foosha xun. Ciidanka Gumaysiga Itoobiya ayaa isku dayay in ay shacabka cabsi galiyaan iyagoo adeegsanaya rasaas nool. Madaxa Nabad-Sugida iyo Ciidanka ayaa odayaasha iskugu yeedhay isagoo ka codsaday in ay shacabka kacdoonka wada la hadlaan oo ay dajiyaan balse waa laga diiday arinkaas. Shacab aad u tiro badan ayaa la xidh xidhay magaaladana bandow ayaa lagu soo rogay.
Ciidanka Gumaysiga Itoobiya iyo Qawlaysatada Liyu-Boolis ayaa xasuuq iyo xad gudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha ka waday dhulka Soomaalida Ogadenya 25 tii sano ee lasoo dhaafay iyagoo ka dhacay Ogadenya meel ka mid ah cadaabkii aduunka. Inkasta oo shacabku uu halgan iyo iska caabin adag kala hortagay taasoo wax kasta loo huray ayaa hadana uu rajo ka qabaa shacabku in Ra’iisul-Wasaaraha cusub ee Itoobiya uu isbadal u horseedi doono, isagoo talaabo sharciga waafaqsan ka qaadaya taliska TPLF iyo wakiilkiisa Cabdi Ilay.
Inkasta oo xaalada Ogadenya aysan waxba iska badalin marka loo fiiriyo isbadalka ka dhacay Itoobiya ayaa hadana waxa uu shacabku ku talaabsaday inuu si nabadgaliyo ah xaqiisa ku raadsado. Dhaqdhaqaaqyo badan oo lagaga soo horjeedo xasuuqa Ogadenya ka socda ayaa ka bilowday dunida dacaladeed gaar ahaan Gobolka Shiniile., kadibna ku fiday Faafan, Qaybo kamid ah Dhagaxbuur, Godey iyo dhamaan Ogadenya. Shacabka kacdoonka wada ayaa codsanaya in xaalada militari tan iyo 1994 tii iyo cadaalad darada ay ku jiraan laga qaado oo isbadal ay helaan.
Marjinta Taysiir waxay shacabka Ogadenya dib usoo xasuusinaysaa marjintii Ridwan ee ciidanka Gumaysiga Itoobiya ay kula keceen sanadkii 2007 dii. Waa qayb ka mid ah hab dhaqanka TPLF ee ka dhanka ah Shacabka Ogadenya si dagaal dhan kasta ah loogu qaado Ogadenya isla markaana dib u dhis iyo hormar loogu sameeyo Gobolka Tigray.
ONLF waxay si kulul u cambaaraynaysaa taliska Itoobiya ee ka raaliga ah in xasuuq iyo argagixin joogto ah lagu hawo guud ahaan shacabka Ogadenya taasi oo horseeday in falkan xun ee Taysiir lagula kacay oo ka dhaco wadanka oo idil, waxaa kale oo shacabka Soomaalida Ogadenya loogu baaqayaa in loo midoobo sidii la iskaga kaashan lahaa la dagaalanka iyo ka hortaga taliskan dhiigyo cabka ah oo xornimo buuxda loo gaadhi lahaa iyadoo loo wada dhan yahay.
Waxaa kale oo ONLF ay beesha caalamka ugu baaqaysaa sidii culays loo saari lahaa dawlada Itoobiya in ay joojiso dambiyada iyo gumaadka shacabka Soomaalida Ogadenya lagu hayo, iyadoo loo adeegsanayo Cabdi Ilay, iyadoo loo ogolaanayo shacabka Somaalida Ogadenya inay aayahooda ka tashadaan cadaadis iyo cabudhin la’aan.
ONLF waxay taageeraysaa oo ay garab taagan tahay halganka shacabka Soomaalida Ogadenya ee lagaga soo horjeedo cabudhinta iyo cadaadiska Gumaysiga Itoobiya.
Midnimo, Adkaysi, isku-tashi iyo Guul.